2017 – Thadin Media
ခလရ (၂၉၇) နောက်တန်း အခြေချစခန်းကို KIA လက်နက်ကိုင်သူပုန်များ တိုက် ခိုက်
[Zawgyi] ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် လီဒိုလမ်းမပေါ်ရှိ ရှဒူဇွပ်ကျေးရွာအခြေစိုက် ခလရ (၂၉၇) နောက်တန်း အခြေချစခန်းကို ကေအိုင်အေ လက်နက်ကိုင်များက ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက် နံနက်အစောပိုင်းတွင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနှင့် နံနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင် ပြန်လည် ဆုတ်ခွာသွားကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားမှုများအရ သိရသည်။ ရှဒူဇွပ်ဒေသခံ တစ်ဦးက “မနက်စောစောပဲ။ ၆ နာရီ မထိုးခင်ပေါ့။ ရှဒူဇွပ် စခန်းကုန်းကို ကေအိုင်အေအဖွဲ့တွေ လာပစ်တာ။ မနက် ၉ နာရီခွဲကျော်မှ ပစ်ခတ်သံ တိတ်သွားတာ။ တပ်မတော်ဘက်က…
ISISမွက်စလင်အကြမ်းဖက် များ က ရုရှားစစ်​ပုလိပ်​တပ်​ဖွဲ့ကို ၀ိုင်းပိတ် ဖမ်း ခဲ့
[Zawgyi] ဆီးရီးယားနိုင်​ငံ အ​နောက်​​မြောက်​ပိုင်း ( တူရဂီနဲ့နယ်​စပ်​ချင်းကပ်​လျက်​တည်​ရှိ ) Idlibပြည်​နယ်​ ထဲမှာ တပ်​ဖွဲ့ဝင်​ (၂၉)​ယောက်​ ပါဝင်​တဲ့ ရုရှား စစ်​ပုလိပ်​တပ်​ဖွဲ့ကို အင်​အားတစ်​ရာ​ကျော်​ရှိပြီး သံချပ်​ကာကားနဲ့ လက်​နက်​ကြီး​တွေတတ်​ဆင်​ထားတဲ့ ISIS အစ္စလာမ်​ အစွန်း​ရောက်​ အကြမ်းဖက်​အဖွဲ့က ၀ိုင်းမိပါတယ်​။ သာမန်​အားဖြင့်​ စစ်​ပုလိပ်​ တပ်​ဖွဲ့​တွေက ​ရှေ့တန်းကို ထွက်​ခဲတယ်​ ဆိုပါတယ်​။ အခု တာဝန်​အရ (​မြေပုံမှာ ​ဖော်​ပြပါ) အ၀ိုင်းခံရတဲ့​နေရာ အ​ရောက်​မှာ သတင်း​ပေါက်​ကြားလို့ ၀ိုင်းပိတ်​ခံရတာလို့ ယူဆ ​ပြောဆိုပါတယ်​။ (ဒီ ISISအဖွဲ့ဟာ အ​မေရိကန်​တပ်​​တွေနဲ့…
ကချင်မှာ တပ်မတော်က လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု ပြုလုပ်
[Zawgyi] လတ်တလောကာလအတွင်း ကေအိုင်အေ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့ နဲ့ အစိုးရ စစ်တပ်တို့အကြား ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေမှာ တပ်မတော်ဘက်က လေကြောင်းသုံး တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပြုလုပ်လာနေတယ်လို့ ကချင်ဒေသခံ အချို့နဲ့ ကေအိုင်အေ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေအတါင်း ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်းက ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း ၁၂ နဲ့ ၁၇ တို့ရဲ့ နယ်မြေတွေနဲ့ တနိုင်းဒေသက ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း ၁၄ နယ်မြေတွေမှာ တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ ကေအိုင်အေရဲ့ နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့ရုံးမှ…
[Zawgyi] 2018 နှစ်သစ်တွင်လည်း မြောက်ကိုရီးယားနို င်ငံ၏ နျူကလီးယားလက်နက် အဆင့်မြင့်တိုးချဲ့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းသွားလိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာန KCNA က အသိပေးကြေညာလိုက်သည်။ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းကလည်း ဒါဇင်ချီသော နျူကလီးယား ဒုံးလက်နက်စမ်းသပ်မှုမျိုးစုံ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ယင်းလုပ်ဆောင်ချက် များနှင့်အတူ အမေရိကန်ဦးဆောင်သော ကမ္ဘာနှင့်ရင်ဆိုင်ထိပ်တိုက်တွေ့ မှုများ ရှိခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။ ကုလမသဂ္ဂလုံခြုံရေးအစည်းအဝေးအထိ ပေါက်ရောက်ခဲ့သော မြောက်ကိုရီးယားအရေးသည် အမေရိကန်အတွက်လည်း ခေါင်းခဲ စရာဖြစ် လာနေကြောင်း၊ ထိပ်တိုက်အပြန်အလှန်ဝေဖန်မှုများ ဖိအားပေးမှုများဖြင့် နှစ်တစ်နှစ်ကို အဆုံး သတ်တော့ မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း…
[Zawgyi] ဟူ့စတန်တွင် သေနတ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား၊ လူ ၃ ဦး သေဆုံး (လွန်ခဲ့သော ၆ နာရီ ခန့်က) social shares0ယောက် share ထားသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆက်ပြည်နယ် ဟူ့စတန်မြို့ ရဲဋ္ဌာနအတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) ဟူ့စတန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက် (ဆင်ဟွာ) အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆက်ပြည်နယ် ဟူ့စတန်မြို့ အနောက်တောင်ပိုင်းတွင် သေနတ်ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ သေနတ်သမားအပါအဝင် လူ သုံးဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဟူ့စတန်…
[Zawgyi] ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲပြီးနောက်မှာ ရုရှားဟာ မြောက်ကိုးရီးယားကို တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည်နည်းပညာတွေရောင်းချပေးခဲ့တယ်လို့ ဝါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာကြီးကရေးသားလိုက်ပါတယ်။ ၁၉၉၂ခုနှစ်က Makeyev ဒုံးပျံဒီဇိုင်းဗျူရိုက ဒုံးပျံပညာရှင်နဲ့မိသားစုဝင်၆၀ကျော်ဟာ ပြုံယမ်းကို အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သွားရောက်ဖို့ ထွက်ခွာစဉ် မော်စကိုလေဆိပ်မှာ အဖမ်းခံခဲ့ကြရဖူးပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်၂၀၁၆မှာပြုံယမ်းကစမ်းသတ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့Hwasong-10 (Musudan missile) ဟာ Makeyev ဒုံးပျံပညာရှင်တွေတီထွင်ထုတ်လုပ်တဲ့ ဆိုဗီယက်ခေတ်ရေငုတ်သင်္ဘောပစ်ပဲ့ထိန်းဒုံးSLBMတွေရဲ့ အသွင်အပြင်အတိုင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ၂၉ရက်မှာ ပြုံယမ်းကကြေညာခဲ့တဲ့အမေရိကန်မြို့ကြီးတွေကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည်တွေရဲ့နည်းပညာဟာ Makeyev Rocket Design Bureau ရဲ့ Blueprints ထဲကနည်းပညာတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်လို့ အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးက သိရှိခဲ့ကြောင်း ဝါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာကြီးက ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ [Unicode] ဆိုဗီယကျယူနီယံပွိုကှဲပွီးနောကျမှာ ရုရှားဟာ…
ကိုင်ရိုအနီး ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် လက်နက်ကိုင်တစ်ဦးက တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရာ ၁၁ ဦးထက်မနည်းသေဆုံး
[Zawgyi] လက်နက်ကိုင်တစ်ဦးက ကိုင်ရိုအနီး ခရစ်ယာန်ပိုင် ဆိုင်တစ်ဆိုင်နှင့် Coptic Orthodox ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ ရက်က တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ လူ ၁၁ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ရိုက်တာသတင်းတစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် အဆိုပါလူအား ဒဏ်ရာများဖြင့် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း အီဂျစ်ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးနှင့် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောခဲ့သည်။ အိုင်အက်စ်အကြမ်းဖက်သမားများက အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုမှာ ၄င်းတို့ လက်ချက် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာသော်လည်း ထိုကဲ့သို့ ပြောကြားမှုအတွက် မည်သည့် သက်သေအထောက်အထားမှ မရှိကြောင်း သိရသည်။ ဇန်နဝါရီ…
C602 ဒုံး ပျံ များ အကြောင်း
[Zawgyi] တရုတ်လို YJ62 လို့ခေါ်ကြတဲ့ သည်ဒုံးပျံတွေဟာ အမေရိကန်ရဲ့ RGM109 တိုမာဟော့နဲ့ အလွန်ဆင်တူတဲ့ ပုံတူဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသံအောက်အမြန်နှုန်း (၀.၆) ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်နဲ့ လိုက်လျောညိထွေပျံသန်း တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ တာလတ်ပစ် ခရုစ်ဒုံးပျံအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ရေယာဉ်များနဲ့ ကမ်းရိုးတမ်းကာကွယ်ရေး ဒုံးတပ်ဖွဲ့တွေက အသုံးပြုကြပါတယ်။ ၂၀၀၅ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဖေါ်ပြသခဲ့တဲ့ မူလ YJ62 ဟာ ကီလိုဂရမ်၂၀၀ အလေးချိန်ထိပ်ဖူးကို သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး ၄၀၀ကီလိုမီတာ(ရေမိုင်၂၂၀) အကွာအဝေးထိပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုတိကျစေဖို့ ရေဒါတွေ၊ စနစ်တွေ အဆင့်မြင့်တင်လိုက်တဲ့ C602 မှာတော့ ကီလိုဂရမ်၃၀၀ အလေးချိန်ထိပ်ဖူးကို သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး…
[Zawgyi] ယ​နေ့ မနက်​ ၇ နာရီခန့်​တွင်​ မိုင်းငေါ့မြို့နယ် ​ကျောက်ဖြူ​လေးကျေးရွာအနီးတွင် နယ်မြေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ​ကျောက်မဲသား ​ရွှေဘ စစ်​သည်​​တော်​များအား TNLA အဖွဲ့မှ ​ခြောင်း​မြောင်းတိုက်​ခိုက်​ရာ ​ရွှေဘမှ ပြန်​လည်​ပစ်​ခတ်​​သော​ကြောင့်​ TNLA အဖွဲ့ ဆုတ်​ခွာထွက်​​ပြေးပါတယ်​ ဆုတ်​ခွာသွားတဲ့ TNLA ​နောက်​သို့ ​ရွှေဘ စစ်​သည်​များ တရကြမ်းလိုက်​တိုက်​ရာ ​ခြောင်း​မြောင်းတိုက်​ခိုက်​​သော ​နေရာနဲ့ ၂ကီလိုမီတာ အကွာ​လောက်​တွင်​ ရန်​သူ အ​ခြေပြု စခန်းကုန်း ၂ခု ​တွေ့ရှိရာတွင်​ ​ရွှေဘ စစ်​သည်​​တွေဟာ ၁၂၂ ပစ်​ကူ ရယူပီး စခန်းသိမ်းတိုက်​ပွဲ…
လာတိုက်တဲ့ KIA သပုန်သောက်ခွက် ……………………………………………………….
December 31, 2017 aPolitical
[Zawgyi] လာတိုက်တဲ့ KIA သပုန်သောက်ခွက် ………………………………………………………. နောက်မှာမိန်းမတွေကျန်ခဲ့တဲ့တပ်ကို လာတိုက်တာတဲ့ သောက်ရှက်ကို မရှိတာ။ KIAသပုန်ကသူကိုမှတ်မိမှာဆိုးလို့ဆိုဘဲ ဒါကြောင့်မျက်နာကိုချီးကြွင်ထဲ ခေါင်းနှစ်လာတဲ့ကောင်ရှိတယ်။ (ရုပ်ဖျက်လာတယ်ပေါ့)…. အမှိုက်ပုံက အရူးမလွတ်ပစ်ထားတဲ့ ထမိန်စုတ် ကောက်ခြုံလာတဲ့ကောင်ရှိတယ်ဗျာ။ (အရပ်သားအသွင်ဆောင်ပေါ့)…. KIAသူပုန်လုပ်စားချင်သေးတယ် လူမှတ်မိမှာလည်း ကြောက်သေး… တောခွေးချီးပေမှာခုမှကြောက်နေတယ်… အစားချောင်းမလားလို့သေနတ်ကိုင်ပြီး KIAသူပုန်လုပ်တယ် အင်းအားများများ ချောင်းပစ်တာလောက်ကို အဟုတ်ကြီးထင် ယောကျာ်းချင်းကျတော့မတိုက်ရဲ အလွယ်ရမလားလို့ နောက်ကရဲမေတွေဆီ လာတိုက်တယ်။ နောက်ချန်အဖွဲ့နှင့် ရဲမေတွေကပြန်တွယ် လိုက်တာ အလောင်းတောင်ပြန်မကောက် သွားဘူး။ ပြေးလိုက်တာ လွန်ပါရော အပြေးမှန်သွားတယ် မင်းတို့ရဲ့…